Ny kinova vaovao an'ny Akira 0.0.14 dia efa navotsotra ary ireo no fanovana | Ubunlog
Ny kinova Akira 0.0.14 vaovao dia efa navotsotra ary ireo no fanovana azy
Rehefa afaka valo volana ny fampandrosoana Akira 0.0.14 mpanonta sary vetaveta dia navotsotra izay nohamarinina amin'ny famoronana endrik'ireo mpampiasa interface. Ny tanjona faratampon'ny tetik'asa dia ny mamorona fitaovana matihanina ho an'ny mpamorona front-end, zavatra mitovy amin'ny Sketch, Figma na Adobe XD, fa mifantoka amin'ny fampiasana Linux ho sehatra lehibe.
Tsy toy ny Glade sy Qt Creator, Akira dia tsy natao hamoronana kaody na interface miasa mampiasa fitaovana manokana, fa kosa mikendry ny hamaha ny asa ankapobeny, ny fomba famoronana endriny interface, sary ary sary. Akira dia tsy mifindra amin'ny Inkscape, satria ny Inkscape dia mifantoka amin'ny famolavolana pirinty fa tsy ny fampiroboroboana ny interface, ary samy hafa ihany koa amin'ny fomba fandaminana ny fivezivezena.
akira dia mampiasa ny format ».akira» azy manokana hitahiry rakitra, izay rakitra zip misy rakitra SVG ary trano fitahirizana git eo an-toerana miaraka amin'ny fanovana. Ny fanondranana sary mankany amin'ny SVG, JPG, PNG, ary PDF dia tohana. Akira dia manolotra ny endriny tsirairay ho toy ny drafitra misaraka miaraka amina ambaratonga fanovana roa:
Ny ambaratonga voalohany (fanovana endrika) dia ampidirina mandritra ny fisafidianana ary manome fitaovana ho an'ny fanovana mahazatra toy ny fihodinana, fanovana habe, sns.
Ny ambaratonga faharoa (manamboatra làlana) dia ahafahanao mihetsika, manampy ary manala node avy amin'ny lalan'ny endrika amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny Bezier, ary koa ny lalana akaiky na manapaka.
1 Vaovao lehibe momba an'i Akira 0.0.14
2 Ahoana ny fametrahana Akira amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Vaovao lehibe momba an'i Akira 0.0.14
Ao amin'ity kinova vaovao Akira 0.0.14 ity dia manasongadina fa ny famolavolana endrika manontolo ny firafitry ny tranomboky dia niasa hiasa amin'ny lamba.
Ny iray amin'ireo fanovana hafa izay niavaka dia nampihatra ny fomba fanovana Pixel Grid ho an'ny fametrahana ireo singa rehefa jerena. Ny kodiarana dia velomina amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra eo amin'ny tontonana ary hovonoina ho azy rehefa latsaky ny 800% ny maridrefy, miampy ny fahaizana manamboatra ny loko misy an'ireo tsipika fakantsary pixel.
Azontsika atao ihany koa ny mahita fa ny fanohanana torolàlana dia napetraka mba hifehezana ny fikitika ny fetran'ny endrika efa misy (Snap Guides). Manohana ny fametrahana ny loko sy ny tokonam-baravarana amin'ny fisehoan'ny mpitari-dalana.
Niampy fanohanana ny fanovana habe ny singa amin'ny lafiny rehetra.
Ny fahaizana manampy sary dia omena amin'ny alàlan'ny fisintomana miaraka amin'ny totozy avy amin'ny fitaovan'ny sary.
Nanampy ny fahaizana mandamina loko famenoana sy famaritaka maro ho an'ny singa tsirairay.
Nanampy fomba iray handrefesana singa mifandraika amin'ny afovoany.
Tafiditra ao ny fahafaha-mamindra sary amin'ny lamba.
Natao ny fanatsarana ny fahombiazana.
Ato ho ato, ny fananganana dia ho vonona amin'ny endrika fonosana Elementary OS sy fonosana Snap. Ny interface dia noforonina araky ny torolàlana nomanin'ny tetik'asa Elementary OS ary mifantoka amin'ny fampisehoana avo lenta, ny fisainana ary ny endrika maoderina.
Ahoana ny fametrahana Akira amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana dia zava-dehibe ny manamarika fa Akira mbola eo amin'ny dingana fampandrosoana ary ny fanangonana ankehitriny natolotra dia mety misy lesoka.
Fa ho an'izay liana Amin'ny fahafantarana ny tetikasa, fizahan-toetra azy io na raha afaka manohana azy ianao dia azonao atao ny misintona sy mametraka an'i Akira amin'ny fampiasana ireo fomba rehetra zarainay eto ambany.
ankapobeny ho an'ny fizarana izay mifototra amin'ireo kinova roa farany an'ny LTS an'ny Ubuntu tsy maintsy efa manana ny fanohanan'ny Snap ary miaraka amin'izany no hahafahan'izy ireo mametraka an'i Akira.
Raha ireo izay Ireo mpampiasa Elementary OS dia afaka misintona sy mametraka ny rindranasa mivantana avy amin'ny AppCenter.
Raha hiverenana any amin'ny hafa isika dia mila manokatra fantsona fotsiny ary hametraka ity baiko manaraka ity ao aminy:
Amin'ny tranga lavitra fa tsy manana snap napetraka sy azonao ampiasaina amin'ny rafitrao ianao dia azonao atao izany amin'ny fanoratana ity manaraka ity:
Ary vonona miaraka amin'izany, azonao atao ny manatanteraka ny baiko teo aloha hametraka Akira.
Farany, fomba tsotra iray hafa hahafahanao mametraka an'i Akira ao amin'ny rafitray dia miaraka amin'ny fanampian'ny fonosana Flatpak, noho izany dia tsy maintsy manana an'io fanohanana io isika napetraka sy ampiasana.
Raha hametraka an'i Akira avy ao amin'ny Flatpak dia mila manokatra terminal fotsiny isika ary ao no hamakiantsika ireto manaraka ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » sary » Ny kinova Akira 0.0.14 vaovao dia efa navotsotra ary ireo no fanovana azy
Ubuntu 21.10 Impish Indri dia manomboka ny fivoarany ary efa fantatray ny daty famoahana.
Geary 40, fanavaozana vaovao no ho tonga amin'ity mpanjifa mail ity